फाटेका चप्पल लगाउने नेताहरु चिल्ला गाडी र महँगो वंगलामा वस्न थालेका छन्
२०७८ भाद्र १३, आईतवार ०९:५३
विष्णुजङ बस्नेत, पूर्व केन्द्रिय सदस्य, जसपा
एवं अध्यक्ष, भाडावाल सरोकार समाज
१. यहाँलगायत डेढ दर्जन केन्द्रिय सदस्य सहितजनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव समुह) परित्याग गरेको घोषणा पत्रकार सम्मेलनमार्फत गर्नुभयो । पार्टी परित्याग गर्नुको कारण के हो ?
उपेन्द्र यादवको नेतृत्व रहेको संघीय समाजवादी फोरमसँग थुप्रै पार्टी एकताहुँदागरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई लत्याइएको, मुख्य नेतृत्वमा रहेकाउपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराइको रवैया नवदलीएको, एकता प्रकृयाबाट आएका नेतृत्वहरु विचएकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र छिर्के हान्ने काममात्रभएको, गरिब मजदुर उत्पीडीत जनतालाई मुक्तिको सपनामात्र बाँढेको, फोरमले लिएको ७ क्लष्टरलाई उल्लंघन गर्दै ३ क्लष्टरको मात्र वकालत गर्न थालेको, नेपालको वर्तमान संविधानलाई प्रतिगामी संविधानभनेर ६ महिनालामो आन्दोलन गरेर संविधान पुनर्लेखन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको भएपनि त्यसप्रति वेवास्ता गरिएको, सत्ता स्वार्थका लागि थुप्रै एजेण्डाहरुलाई तिलाञ्जली दिएको कारणले गर्दा म लगायतअन्य साथीहरुले पार्टी छोडेका हांै । अगामी दिनमा सयौंको संख्यामा नेतृत्वमा रहेका साथीहरुले समेत पार्टी छोड्ने योजना रहेको छ ।
२.यहाँहरुले जनता समाजवादी पार्टी त छोड्नु भयो । अब के गर्नुहुन्छ ?अर्कोनयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ या कुनै विचार मिल्ने शक्तिहरुसँग पार्टी एकतागर्नुहुन्छ ?
हामी साथीहरुसँग गहन छलफल गरीरहेका छौं । हामीमुलुकको समृद्धि, विकास, स्वाधीनताको पक्षमा छौं । हाम्रो यात्रा समाजवादको हो । उत्पीडीतवर्ग जनजातीहरुको संख्या ठूलो छ । त्यसको मुक्तिहुनुपर्दछ । आज ठुलो संख्यामायुवाहरु विदेशपलायनभएका छन् कामको खोजीको लागि । देश रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । आजमुट्ठिभर जनताको मात्र कल्याण भएको छ ।लाकतान्त्रिक पद्धतिको केन्द्रमाआमजनताहोइन ठुला कर्पोरेट, दलाल, साहु, महाजन र नोकरशाहीहरुकै हालीमुहाली छ । अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र होइन लुटलन्त्र छ । चाहे प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपीओली, माधब नेपाल, उपेन्द्र वाबुराम जोसुकै नेतृत्वमा आउन् यिनीहरुले देशमा केहि गर्न सक्दैन । अबयुवा नेतृत्वले देश सम्हाल्नु पर्छ । हामीविचार मिल्ने पार्टी तथाशक्ति समूहसँग मिलेर जान सक्छौं त्यस्तो संभवनभए स्वदेशवादी दुष्टिकोण सहितको समाजवादी पार्टी बनाउँछौं ।
३.यहाँहरुले ९० प्रतिशतभन्दा वढी जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानलाई विरोध गरिरहनु भएको छ । के यो संविधान वेठिक छ ?
यो संविधान २÷४ जनाव्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ र हितरक्षाको लागिबनाएको हो । संविधानसभाका सदस्यहरुले आ–आफ्नो पार्टीको डरले मात्रतालीबजाएकाहुन् । यो संविधानवर्गिय, जातिय उत्पीडन जनताको हितमा छैन । यो संविधानको पुर्नलेखन तथा संशोधनअनिवार्य छ । यो दिशामाजनता समाजवादी पार्टी अघि वढेन । उसले आफ्नो संविधान संशोधनको विषय सत्ताप्राप्तिकालागि सौदावाजी गरेको छ । त्यसैले हामीले उनीहरुसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेऊ । संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता , समावेसी, समानुपातिक, धर्मनिरमेक्षताआदिको व्यवस्थाभएपनित्यसको दुरुपयोग भएको छ । समानुपातिकमा नाममा आफ्ना श्रीमति तथा नातेदारलाइ टिकट दिइएको छ । समानुपातिक टिकट करोडौ मूल्यमा पार्टीका नेताहरुले वेच्ने गरेका छन् । लोकतन्त्र पछि नव धनाढ्य वर्गको जन्मभएको छ । फाटेका चप्पल लगाउने नेताहरु, चिल्ला गाडीमा शयर र महँगो वंगलामा वस्न थालेका छन् । आज नेपालीहरुलाई धर्मनिरपेक्षता भन्दापनि खोप चाहिएको छ ।
४.संघीयताको कारणले मुलुकविग्रेको हो ? के छ यहाँको धारणा ?
संघीयताको कारणले मुलुकविग्रेको होइन । नेताहरुको कामगर्ने प्रवृत्ति र गलतकार्यशैलिको कारणले मुलुकविग्रेको हो । नेपालभन्दा साना देशहरुमापनि संघीयता लागु छ तर तिनीहरुले राम्रै प्रगति गरेका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार नेपालमाप्रयोग भएको छैन । संघीयताको अर्थ शक्तिविकेन्द्रिकरण हो । तर यहाँअझै पनिहिजोकै जस्तो सामान्तवादीअवशेसहरु छन् ।दलाल, माफियातथा तस्करहरुले देश संचालन गरेका छन् । कर्मचारीले देश चलाएका छन् । धेरै कर्मचारीहरुले घुस नखाइकन सानो कामगर्न पनि मान्दैनन् ।
५.यहाँहरुले समाजवादको कुरामाजोड दिनु भएको छ । कस्तो खालको समाजवादको परिकल्पनागर्नु भएको छ ?बताई दिनुहोस ।
अहिले नेपालमा धेरै पार्टीहरुले समाजवादको कुरा गरिरहेका छन् । ती सबै पार्टीहरुले समाजवादको मुखुण्डो मात्रलगाएका छन् । यी समाजावदको खोल ओडेर सामान्तवादीको चरित्रको अनुशरण गरेका छन् । आज ६०१ राजाहरु छन् ।तीनीहरुले शासन गरेका छन् । हामीले लागु गर्ने भनेको समाजवाद नेपालीविशेषता सहितको समाजावदहो । कुनै देशबाटनक्कलगरिएको समाजवादहोइन । हामीले प्राप्तगर्ने समाजावदशिक्षा, स्वास्थ्यनिशुल्कहुन पर्छ भनेका छौ । रोजगार जनताको मौलिकहक हुनुपर्छ ।
६.मुलुकको समृद्धिको कसरी हुन्छ ?बताइदिनुहोस न ।
मुलुकमा सबैभन्दापहिला मृत्यु दण्डको कानून चाहिन्छ । मृत्यु दण्डको कानूनभयो भने कसैले भ्रष्टाचार, बलात्कार गर्दैन । आज कानूनफितलो भएको कारणले देशको वेथिति वढेको हो । आज भ्रष्टाचार गर्ने मानिस सामान्य धरौटीमा छुटेको छ । राज्यको संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार बढेको छ । मुलुक समृद्धि हुन वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा गएका मानिसहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । देशमै रोजगारीको सृजनागर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण नेपालमा विकासका सम्भावनाहरु धेरै छन् । कृषि, जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा रोजगारी बढाउनु पर्छ ।
७.अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ ?बताई दिनुहोस न ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बेठिक छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । करोडौं युवाहरु विदेश छन् । तिनीहरु मतदानबाट वन्चित छन् । तिनीहरुलाई पनि समेट्नु पर्दछ । सहि योग्य मानिसले पार्टीमा टिकट पाउँदैन । जसले पार्टीलाई ठुलौ पैशाखर्च गर्छ त्यसले टिकट पाउँछ । निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अर्थात ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था हुनुपर्दछ । तब मात्र निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ ।
८.तपाई भाडावाल समाजको अध्यक्षपनि हुनुहुन्छ । भाडामा वस्ने मानिसहरुको के कस्ता समस्याहरु छन् ?बताइदिनु होस न ।
आज देशभरिनै प्रायः घरवेटीहरुले भाडामा वस्ने मानिसहरुसँग मनपरी ढंगले भाडा असुल गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरुले आफुले चाहेको वेला जुनसुकै अवस्थामा उनीहरुलाई हटाएका छन् । घरवेटीहरुले राज्यलाई कर छलेका छन् । भाडामा वस्नेहरुसँग राज्यले कर लिएको छ । कुनै पनि व्यवसायगर्दा घरवेटीले एग्रिमेन्ट (सहमतीपत्र) बनाउन चाहँदैन । जसको कारण मानिसहरुलाई व्यवसाय गर्न अप्mठयारो भएको छ । यदि घर वहाल संझौतापत्र गरेपनि उनीहरुले न्यून मल्याँकन गराई कम भाडा देखाइ कर छली समेत गरेका छन् । राज्यले यस सम्बन्धि ठोस नीतिनियम ऐन कानून बनाउन सकेको छैन । यस्ता विषयमा हाम्रो समाज पनि लडिरहेको छ ।
प्रस्तुती नन्दलाल खरेल
प्रकासित मिति २०७८–५–१३